သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်ဟာ အနုပညာအရည်အသွေးပြည်ဝတဲ့ အတော်ဆုံးမင်းသာတစ်လတ်ဖြစ်ကြောင်းချက်ကျလက်ကျပြောပြလာတဲ့ အမာခံပရိတ်သတ်တစ်ဦး – Update News
သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်ဟာ အနုပညာအရည်အသွေးပြည်ဝတဲ့ အတော်ဆုံးမင်းသာတစ်လတ်ဖြစ်ကြောင်းချက်ကျလက်ကျပြောပြလာတဲ့ အမာခံပရိတ်သတ်တစ်ဦး
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့သရုပ် ဆောင်ရဲတိုက်ရဲ့အမာခံပရိတ်သတ်တစ်ဦးကသရုပ် ဆောင်ရဲတိုက်ဟာအနုပညာအရည်အသွေးပြည်ဝတဲ့အတော်ဆုံးမင်းသာတစ်လတ်ဖြစ်ကြောင်းအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်နော်။
မင်းသားတွေမင်းသမီးတွေအများစုကဘာမှအခြေ အမြစ်မရှိတဲ့ပေါကားတွေ၊အောက်လုံးတွေနဲ့LGBTတွေကိုနှိမ်ချ insultလုပ်ထားတဲ့ကားတွေ၊ဘာဇာတ်အိမ်မှခိုင်ခိုင်မာမာမရှိ၊အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့၊ယုတ္တိမရှိတဲ့ကားတွေလောက်ကိုပဲရိုက်ကြတာလားပေါ့။လူတွေလည်းဒါတွေကိုဟာသဆိုပြီးပျော်ပျော်ကြီးထိုင်ကြည့်နေကြတာလားပေါ့၊အနောက်နိုင်ငံမှာဆို ရုပ်ရှင်ဆိုတာကိုသေချာရိုက်တာလေ၊….
အရည်အချင်းရှိတဲ့မင်းသားမင်းသမီးရှိခဲ့ရင်တောင် ခေတ်စနစ်ရဲ့အခြေအနေကြောင့်နေရာပေးမခံရဘူး၊2015နောက်ပိုင်းမှသာခေတ်ပြောင်း၊စနစ်ပြောင်းတာကြောင့်မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ကိုမြှင့်တင်ခွင့်ရပြီး ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေအများကြီးရှိလာတာအရမ်းဝမ်းသာတယ်။….
ကဲဆက်ရရင်ခုနကလိုခေတ်ထဲရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရင်း မင်းသားတစ်ယောက်ကိုသတိထားမိလာတယ်၊ကျနော်၁၂နှစ်ထဲကကြိုက်လာတဲ့မင်းသားရဲတိုက်ပေါ့၊သူ့ရဲ့ကားတွေထဲသွေးဆိုတဲ့နာမည်ပါတဲ့ကားစကြည့်မိတယ်၊အဲ့ကားထဲမှာဆိုသရုပ်ဆောင်ချက်တွေက အနှစ်တွေကြီးပဲ၊တကယ့်နိုင်ငံခြားကရိုက်တဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လိုကြည့်ရင်းခံစားလာရတာ။….
နောက်လုံးဝpsychoဆန်ဆန်နဲ့ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတွေ၊သရဲကားဆိုလည်းသူပါတဲ့သရဲကားတွေဆို အရမ်းမိုက်တယ်၊mysteryဆန်တဲ့ကားတွေဥပမာ Dream Catcherလိုမျိုးပစ္စည်းကိုinspireလုပ်ရိုက်ထားပြီးသရုပ်ဆောင်ထားတာတွေသိပ်ကိုကောင်းတာ။
ဒါပေမယ့်အံ့ဩရတာတစ်ခုကသူတစ်ခါမှ အကယ်ဒမီစကာတင်စာရင်းထဲပါတာမမြင်ဖူးသလို အကယ်ဒမီဆုကြီးနဲ့ဆိုဝေးပေါ့၊ပွဲကိုတက်ရဲ့လားတောင်သေချာသတိမထားမိဘူး၊….